Faysal oo durba Jamaal ku qabsaday musharaxnimadii UCID by Mohamed Omar (Hadhwanaagnews) Tuesday, September 18, 2012 Gudoomiyaha UCID Faysal Cali Waraabe ayaa warayribusi uu siyey Wargeyka Geeska shaaca ka qaaday fikir argagax Gudoomiyaha UCID Faysal Cali Waraabe ayaa warayribusi uu siyey Wargeyka Geeska shaaca ka qaaday fikir argagax ku riday taageerayaasha
Jamaal Cali Xuseen. Faysal waxa uu sheegay in Jamaal aanu ahayn musharaxa UCID. Tageerayaasha Jamaal Cali Xusseen oo isku diyaarinaya xafladdo waa weyn oo lagu qabanayo Bristol iyo London ayey arrintani amakaag ku noqotay iyagoo imakuun ka soo koobanaya dhibtii ka gaadhay UDUB oo Jamaal lacagtiina laga cunay musharaxnimadiina loo diiday. Tageerayaasha Jamaal ayaa ka baqaya inuu filinkihrii mid la mid ah Faysal uu uga jilayo UCID dhexdeeda.
Waraysigii oo dhamaystiran halkan ka akhri
Mohamed Omar mohamedomar1234@yahoo.ca